China Cutting Mat ho an'ny Silhouette, 8824, 12 ″ x24 ″ fandriana fanapahana ho an'ny Silhouette comeo Famokarana sy ozinina | Allwin
Kitapo fanapahana Silhouette, 8824, 12 ″ x24 ″ fandriana fanapahana ho an'ny Silhouette cameo
Miasa lavorary ho an'ny milina fitaovana fanapahana elektronika Silhouette Cameo4 / 3/2/1.
Ny tsiranoka fametahana adhesive mahery dia namboarina ho an'ny maivana maivana, fitaovana natolotra ho an'ny karda matevina, karda manjelanjelatra, akora magnetika, tabilao vita amin'ny lamba, lamba misy henjana.
Ny matroka fanapahana fanoloana dia vita amin'ny kalitaon'ny Premium Premium, tsipika fametahana adhesive tack miaraka amin'ny 12 * 24 (inch)
Tazomy ilay rakotra sarimihetsika mazava amin'ireo tsihy fanapahana siloette Siloette ireo rehefa mitahiry mba tsy ho potika sy vovoka hatrany ny fanapahana fametahana tsihy. Ampiasao ny scraper hanesorana ireo sombin-javatra be loatra sy ny spatula hanesorana tsara ireo sary voapaika.
Ireo Mats ireo dia manana ny haavon'ny fihazonana mety tsara hitazomana mafy ny fitaovanao mandritra ary mamela ny fanesorana mora foana ny fitaovana. Ny fandriana fanapahana dia tsara ho an'ny mpanao asa tanana, ny quilter, ny mpianatra kanto ary ny fialamboly hanao ny ankamaroan'ny Tetikasa DIY.
Item Model Model 8824
Vokatry ny vokatra 325x640 mm
Habeny (haben'ny fanontana) 12 x 24 INCH
Mety amin'ny milina Silhouette Cameo4 / 3/2 / 1
Kitapo fanapahana namboarina, hatevin'ny fitaovana 0.5mm. Ny fitaovana dia mangarahara PVC. Ny kitay dia misy karazany roa: ny hafanana avo lenta ary ny fihenan'ny ankapobeny. Manana habe hafa koa izahay: 12 "x 12", 12 "X 8", 12 "x 6", 4,5 "x 12", 4,5 "x 6.5" santimetatra.
Kitapo fanapahana Silhouette, 8812, 12 ″ x12 & ...